Sida loo kala shaandheeyo astaanta Adobe Illustrator talaabo talaabo | Abuurista khadka tooska ah
Lola curiel | | Qalabka Naqshadeynta, muujiye
Markaan abuureyno astaan ​​sumadeed way fiicantahay inaad haysato nooca vector-ka naqshad Caadi ahaan, astaamaha waa in lagu hirgeliyaa qaabab iyo goobo kala duwan, mana aha wax isku mid ah in lagu shaabadeeyo baqshad marka loo eego marquee. Haddii aan kaliya ku hayno astaanta bitmap, waxaan halis ugu jirnaa in markii aan u adeegsanayno cabbirro waaweyn, pixels la arki doono. Haddii tani ay tahay kiiskaaga, waa inaad sii wadaa aqrinta boostada maxaa yeelay waan kuu sheegayaa sida aad u vector-gareyn karto astaan ​​ku taal Adobe Illustrator.
Waxaan arki doonaa laba tusaale, waxaan abuuri doonnaa nooca vector-ka ee astaan ​​loogu talagalay Adobe Photoshop iyo nooca dijitaalka ah ee astaan ​​lagu sawiray warqad.
1 Sida loo calaamadeeyo astaan ​​ku jirta Sawirka sawirka
1.1 Abuur sabuurad iyo Sawire cusub
1.2 Ka samee sawir baafinta Sawirka
1.3 Sida loo sameeyo astaantaada wax laga beddeli karo
1.4 Ku dar magaca sumadda
1.5 Ikhtiyaar kale: isticmaal qalabka qalinka
2 Sidee loo tijaabiyaa astaan ​​loogu talagalay Photoshop
2.1 Abuur sabuurad cusub
2.2 Samee baafinta sawirka Sawirka
2.3 Wax ka beddel cilladaha Astaanta
2.4 Ikhtiyaar kale: isticmaal qalabka qaababka iyo qalabka qalinka
Sida loo calaamadeeyo astaan ​​ku jirta Sawirka sawirka
Abuur sabuurad iyo Sawire cusub
Waxaan ku sawiray astaan ​​warqad yar ka dibna sawir ayaan ka qaaday. Waxaan u soconaa sameyso sabuurad ee Sawirka, waan siiyay Cabirka A4 waana badalay qaabka midabka RGB.
Ka samee sawir baafinta Sawirka
Sawirka ku dhaji sabuuradda, dooro iyo samee "raad raadin sawir". Qalabkani badanaa ma muuqdo, laakiin waxaad ka heli kartaa daaqada> baafinta sawirka. Sida aad arki karto, waxay ku siinaysaa fursado dhowr ah. Ma jiro mid had iyo jeer shaqeeya, markaa waa inaad isku daydaa. Marka laga hadlayo astaamaha, sida caadiga ah si aad u wanaagsan ayey u shaqeeyaan: astaanta madow iyo caddaan, silhouette ama hooska cawl. Kiiskan, waxaan ku dhegi doonnaa astaan ​​madow iyo caddaan ah.
Sida loo sameeyo astaantaada wax laga beddeli karo
Markaad baafinta sameyso, waxaad yeelan doontaa nooc vector ah oo astaanta ah. Si aan wax uga bedelno, waxaan u baahanahay inaan tagno shayga sheyga> ballaadhino iyo la qalabka xulashada tooska ah Waan taaban karnaa istaroog kasta, wax ka beddeli karnaa dhumucda, beddeli karnaa midabada, ka tirtiri karnaa qaybo isla markaana sixi karnaa dhinac kasta oo aan innagu qancinayn astaanta.
Ku dar magaca sumadda
Waxaan u soconaa ku dar magaca sumadda hoosta sawirka. Waxaan doortay Qaab qorista Futura anigana waxaan siiyay a 27 dhibic cabir. Xusuusnow inaad hubiso in dhammaan walxaha astaantu ay si fiican isugu habboon yihiin. Haddii aadan haysan qalab isku toosan oo muuqda, waxaad ka heli kartaa tabka daaqadda.
Ikhtiyaar kale: isticmaal qalabka qalinka
Sida aad u aragto, in kasta oo aan durba wajahnay nooc dijitaal ah, weli waa la sii ogaanayaa in ay tahay sawir gacmeed bilaash ah. Tani ma xuma, dhab ahaantii waxay noqon kartaa qaab la raadsado ka dib. Laakiin haddii aadan rabin inaad ilaaliso noocyadaas khadadka ah, waxaad had iyo jeer ku raadin kartaa gacanta. Adeegso baafinta sawirka maxaan qabanay saldhig ahaan, sii midab aad u fudud oo leh qalabka qalinka tag dhalmada istaroogyada kore.
Sidee loo tijaabiyaa astaan ​​loogu talagalay Photoshop
Tusaalahan kale waxaan leenahay astaan ​​aan ugu tala galay Photoshop. Khasaaraha dhinaca naqshadeynta astaamaha Adobe Photoshop ayaa ah in tani ay tahay software garaafyo fudud ah, taas oo ah, waxaad ku shaqeysaa pixels. Markaad naqshadeynayso astaanta bitmap, waxay na siin kartaa dhibaatooyin xallinta markaan ku hirgelinno dusha sare.
Abuur sabuurad cusub
Waxaan u soconaa sameyso sabuurad leh astaamo la mid ah kii hore (cabirka A4, qaabka midabka RGB) anaguna waan sameyn doonaa fur astaanta Sawirka.
Samee baafinta sawirka Sawirka
Nidaamku wuxuu noqon doonaa mid isku mid ah. Waxaan dooran doonaa astaanta iyo waxaan sameyn doonnaa raadinta sawir. Xaaladdan oo kale xulashada sida ugu fiican u shaqeysa ayaa ah "Silhouettes", inkasta oo sida aad u jeeddo, faahfaahinta qaar ee astaanta, sida midabka, way lumayaan oo qoraalka qoraalka ayaa waxyeelloobi doona.
Wax ka beddel cilladaha Astaanta
Aan aadno tab shey oo guji balaadhi. Iyada oo aaladda xulashada tooska ah, aan u soconno ka saar magaca sumadda oo waxaan ku dari doonaa qoraalka leh Sawirqaade, waxaan dooranay Khariidadda farta qorraxda ee Raleway Light waxaanan ku siinaynaa a 35 dhibic cabir. Lifaaq dhammaan astaamaha astaanta si wanaagsan adiguna diyaar ayaad u ahaan lahayd.
Ikhtiyaar kale: isticmaal qalabka qaababka iyo qalabka qalinka
Sidii aan ku sameynay astaantii ugu horreysay, waxaan ku abuuri karnaa nooc cusub aaladaha barnaamijka. U adeegso qalabka qalinka si aad u raad-raacdo buuraha iyo qalabka suxulka wareegga.
Haddii aad ka heshay casharradan ku saabsan sida loo kala shaandheeyo astaan ​​ku taal Adobe Illustrator iyo Waxaad rabtaa inaad waxbadan ogaato ku saabsan sida loo tijaabiyo sawirada barnaamijka ha seegin qoraalka aan kaaga tagayo adiga oo isku xidhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Sida loo tijaabiyo astaanta Adobe Illustrator
Sida looga saaro astaan-biyoodka sawirka Photoshop